उपत्यकामा निषेधाज्ञा लम्बियो: अब के खुल्ने, के नखुल्ने ? - DURBAR TIMES
HomeNewsउपत्यकामा निषेधाज्ञा लम्बियो: अब के खुल्ने, के नखुल्ने ?
काठमाण्डाै : काठमाण्डाै उपत्यकामा निषेधाज्ञा एक हप्ताका लागि लम्बिएको छ ।
बुधबार बसेको तीन जिल्लाकै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सरोकारवालाबीचको बैठकले निषेधाज्ञा एक हप्ता थपेको ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले जानकारी दिए।
उपत्यकामा गएको ३ गते रातिदेखि लागू भएको निषेधाज्ञा बुधबार राति १२ बजेदेखि सकिने भएपछि फेरि एक हप्ता, भदौ २४ गते राती १२:०० बजे सम्मको लागी थपिएको हो । यसअघि १० गतेसम्म लगाइएको निषेधाज्ञालाई लम्ब्याएर भदौ १७ गते बुधबार राति १२:०० बजेसम्म पुर्‍याइएकाे थियाे ।
पहिलेको भन्दा खुकुलो
हेर्नुहोस् निषेधाज्ञाको आदेश
Previous articleदेशभर ११ सय २० संक्रमित, उपत्यकामा ३ सय ८८
Next articleकरण जाेहर विरूद्द लगातार आक्रमणमा कंगना